CDOLIVE.IN :: Online Nepali News from India, Darjeeling ,Siliguri and Sikkim,Live Video Streaming,Live Nepali News Channel
Tuesday , November 20 , 2018 1:48PM
‘कपिल शो’ मा अब यी कमेडियन नआउने !
मुम्बई 29 जुलाई-केही समय अघि मात्र ‘द कपिल शर्मा शो’ मा जोडिएकी कमेडियन भारती सिंह बाहिरिने भएकी छन्। छ वटा भागमा काम गरिसकेकी भारतीले कपिल शो कुनै छाड्नुका कारण उनको आफ्नै शो हो। चाँडै ‘कमेडी दंगल’ मा देखापर्ने भारतीले आफ्नो शो प्रशारण नहुन्जेल कपिलसँगै काम गर्ने बताएकी छन्। एक अन्तर्वार्तामा बौल
ओस्कार विजेता साथै वरिष्ठ कलाकार मार्टिन अब रहेनन्
लस् एन्जेलस् 17जुलाई- ओस्कार पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी वरिष्ठ चलचित्र कलाकार मार्टिन लान्दाउको 89 बर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ। उनी आवद्ध एक चलचित्र उत्पादक एवम् प्रचारप्रसार समितिले सोमबार सो जानकारी दिएको समाचारमा जनाइ
कपिल शर्माको बारेमा के भने मिथुन चक्रवर्तीले?
मुम्बई दिल्ली 12 जुलाई-बलिउड दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती चाँडै टिभी शोमा देखा पर्दैछन्। सोनी च्यानलबाट प्रशारण हुने कमेडी शो ‘द ड्रामा कम्पनी’ मा उनी देखा पर्ने भएका हुन्। शोमा कमेडियन कृष्णा अभिषेक, सुगन्धा मिश्रा, अली अस्गरका साथै सुदेश लहरी पनि हुनेछन्। सबैलाई ‘द ड्रामा कम्पनी’ लाई ‘द कपिल शर
सलमानलाई लक्जरी कार, शाहरुखको उपहार
मुम्बई6जुलाई- केही समयअघिसम्म बलिउडका दुई खानहरु शाहरुख र सलमान एक अर्काका प्रतिद्वन्दी मानिन्थे। उनीहरुबीच मतभेद रहेको खबर पनि आइरहन्थे। तर पछिल्लो समय शाहरुख र सलमानको मित्रताका एकपछि अर्का किस्साले चर्चा पाइरहेको छन्। शाहरुखले सलमानको हाल प्रदर्शन भइरहेको फिल्म 'ट्युबलाइट'मा क्यामियो गरेका थिए
मिस वर्ल्ड 2017 चीनमा हुने
6 जुलाई-मिस वर्ल्ड 2017 चीनमा आयोजना हुने भएको छ। मिस वर्ल्डको आयोजक संस्थाले बुधबार सामाजिक संजाल मार्फत यो पटकको मिस वर्ल्ड नोवेम्बर 18 मा चीनमा हुने जानकारी दिएको छ। आयोजकको अनुसार सबै प्रतिस्पर्धीहरु यो प्रतियोगिता अघि सिङ्गापुरमा आइपुग्नेछन्। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताका अन्य जानकारीहरु भने जुलाई
» Last Page 1 of 1
Archives View more
नेपाल राज्यको आर्थिक वर्ष 2074/75 को बजेट
खपरैल गायत्री परिवारद्वारा विश्व शान्ति एकता-अखण्डता महायज्ञ
भारत सरकारले देशमा गोर्खाहरूको जनभावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ –
खाली पेटमा लिच्ची खाँदा
डा. आइबी थापा विद्यालय स्कूलमा स्रष्टा दान खालिङको मूर्ति स्
सिलगढीस्थित अशिघर इलाकामा हत्याको अभियोग
Visits : 145942
: +91 9734488094 : info@cdolive.in
Powered by : darjinfo.in